DIY – Good Health Journal
CLOVE OIL ပွုလုပျနညျး
သှားကိုကျတာအတှကျ လေးညှငျးဆီက သဘာဝအကိုကျအခဲပြောကျဆေးလို့တောငျ ပွောလို့ရပါတယျ။ သှားကိုကျတာက အငျမတနျခံရခကျတဲ့ ဝဒေနာဆိုးကွီးမို့ အခုဖျောပွပေးမယျ့ လေးညှငျးဆီပွုလုပျနညျးကို ကိုယျတိုငျပွုလုပျပွီး အိမျမှာဆောငျထားလိုကျနျော။ ဒါ့ပွငျ လေးညှငျးဆီက တခွားအလှအပနဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး မြားစှာ အသုံးဝငျပါတယျ။ လိုအပျသညျ့ပစ်စညျးမြား ♦ လေးညှငျးပှငျ့ ♦ Base Oil (သံလှငျဆီ ဒါမှမဟုတျ ဗာဒံစဆေီ့) ပွုလုပျနညျး ♦ လေးညှငျးပှငျ့တှကေို ငရုတျဆုံသနျ့သနျ့ထဲ ထညျ့ကာ လေးစိတျကှဲ ထောငျးပါ။ ♦ ပွီးရငျ ဖနျပုလငျးငယျ ဒါမှမဟုတျ မိမိအသုံးပွုလိုရာ ဘူးတဈခုထဲ ထညျ့ပါ။ ♦ Base Oil(Olive Oil) ကို လေးညှငျးပှငျ့တှေ မွုပျတဲ့ အထိ ထညျ့ပါ။ ♦ အဲဒီပုလငျးကို အဖုံးသခြောပိတျကာ နှဈကွိမျခနျ့ သခြောသမအောငျ လှုပျခါပါ။ […]
Posted in: DIYGood Health Admin	 October 4, 2021
ကိုဗဈလှိုငျးတှလေညျး တဈလှိုငျးပွီးတဈလှိုငျးဖွဈပျေါနတေဲ့အခြိနျမှာ ဘယျနရောသှားသှား ပွနျလာတိုငျးလကျဆေးဖို့၊ ပိုကျဆံကိုငျပွီးတာနဲ့ လကျဆေးဖို့က မဖွဈမနေ လုပျကွရမှာပါ။ Sanitizer တှကေလညျး သုံးလိုကျ ကုနျလိုကျ ထပျဝယျလိုကျနဲ့ အပွငျခဏခဏမထှကျခငျြသူတှအေတှကျ ဒီ Hand Sanitizer ပွုလုပျနညျးမှာ ပါဝငျတဲ့ ကုနျကွမျးတှသော ဝယျထားလိုကျပွီး အိမျမှာ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ လိုအပျသညျ့ပစ်စညျးမြာ – ရှားစောငျးလကျပပျ (အစိုဓာတျထိနျးပေးဖို့) – ဗီတာမငျ အီး အဆီ (အသားအရအောဟာရရရှိဖို့) – Peppermint Essential Oil (antibacterial) – Lavender Essential Oil (ရနံ့အတှကျ) – အရကျပွနျ (ရောဂါပိုးမှားသစေဖေို့) ပွုလုပျနညျး – အရကျပွနျ စားပှဲဇှနျးကွီး လေးဇှနျးစာကို ပနျးကနျလုံးတဈလုံးထဲမှာ ထညျ့ပါ။ – အဲဒီထဲကို […]
Posted in: DIYGood Health Admin	 September 16, 2021
Cinnamon Clove Mouthwash Spray ပွုလုပျနညျး
•• အခုဖျောပွပေးမယျ့ သဘာဝခံတှငျးသနျ့ရညျပွုလုပျနညျးက ခံတှငျးရနံ့တငျ သငျးပြံ့စတောမဟုတျပါဘူး၊ သူ့မှာ ပါဝငျတဲ့ပစ်စညျးတှရေဲ့ ရနံ့ကွောငျ့ ခေါငျးအုံ၊ ခေါငျးခဲ စိတျမကွညျမလငျဖွဈနတောတှကေိုပါ သကျသာစနေိုငျတယျလို့ လလေ့ာသူတှကေ ဆိုထားပါတယျ။ ကဲ ပွုလုပျကွညျ့ရအောငျ…။ လိုအပျသညျ့ပစ်စညျးမြား ♦ သဈကွံပိုးခေါကျ ♦ လေးညှငျးပှငျ့ ♦ Organic Agave (iHerb.com တှငျရရှိနိုငျ) ♦ ဗနီလာဆီ ♦ ရေ ပွုလုပျနညျး ♦ အိုးတဈလုံးထဲကို ရခှေကျတဈခှကျနဲ့တဈဝကျစာ ထညျ့ကာ ကြိုပါ။ ♦ ပှကျပှကျဆူလာရငျ လညှေငျးပှငျ့ ၁၃-၁၄ စခေ့နျ့ထညျ့ပါ။ ♦ ပွီးရငျ သဈကွံပိုးခေါကျမှုနျ့ ဇှနျးတဈဇှနျးစာထညျ့ပါ။ ♦ အဲဒီနှဈမြိုးပေါငျးကို ခဏကြိုပွီးနောကျ မီးဖိုပိတျကာ သခြောမှပေါ။ ♦ ပွီးရငျ မီးအေးအေးနဲ့ ၁၀ မိနဈခနျ့ […]
Posted in: DIYGood Health Admin	 September 13, 2020
Rice Coconut Hair Mask
ထမငျးအိုးပွဲ(အရမျးပြော့)သှားလို့ ကုနျပါပွီဆိုပွီး နှမွောနမေယျ့အစား ဒီထမငျးပွဲပွဲကိုပဲ သငျ့ဆံသားအလှအပအတှကျ သုံးကွညျ့လိုကျရအောငျ။ လိုအပျသညျ့ပစ်စညျးမြား ထမငျး အုနျးသီးမှုနျ့ အုနျးဆီ ပွုလုပျနညျး ထမငျးကို ပြော့ပွဲနအေောငျ ခကျြပါ။ အဲဒီထမငျးထဲကို အုနျးသီးမှုနျ့ ခှကျတဈဝကျစာ ထညျ့ပါ။ ပွီးရငျ အုနျးဆီ ခှကျတဈခှကျစာ ပေါငျးထညျ့ပါ။ အားလုံးကို မှတေံနဲ့ သခြောမှပေါ။ ကျောပွဲလိုအခွအေနဖွေဈသှားပွီဆိုရငျ အသငျ့အသုံးပွုလို့ ရပါပွီ။ အသုံးပွုနညျး ရလာတဲ့အနှဈကို သငျ့လကျနဲ့ ယူပွီး ဆံသားတှပေျေါမှာ နှံ့စပျအောငျ လိမျးပါ။ (အလှပွငျဆိုငျတှမှော ပွုလုပျတဲ့နညျးအတိုငျး) ပွီးရငျ ငှပွေားပတျကာ အုပျလိုကျပါ။ ၄၅ မိနဈခနျ့ ထားပွီးနောကျ သဘာဝခေါငျးလြှျောရညျနဲ့ ခေါငျးလြှျောလိုကျပါ။ တဈပတျ တဈကွိမျ ပေါငျးတငျနိုငျပါတယျ။ (မှတျခကျြ ။ ။ ပိုနတေဲ့အနှဈတှကေို အဖုံးပါပုလငျးထဲထညျ့ကာ ရခေဲသတ်ေတာမခဲခနျးထဲမှာ သိမျးဆညျးနိုငျပါတယျ) […]
Posted in: Article, DIYGood Health Admin	 September 5, 2020
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ကာကှယျတဲ့ပစ်စညျးမှာ တဈခုအပါအဝငျဖွဈတဲ့ Hand Sanitizer ကို နှဈမိနဈအတှငျး ကိုယျတိုငျပွုလုပျနညျး
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ကာကှယျတဲ့ပစ်စညျးမှာ တဈခုအပါအဝငျဖွဈတဲ့ Hand Sanitizer (လကျသနျ့စငျဆေးရညျ) ကို နှဈမိနဈအတှငျး ကိုယျတိုငျပွုလုပျနိုငျဖို့ ပုံနှငျ့တကှ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ အခြိနျလညျးအမြားကွီးမပေးရတာကွောငျ့ ကိုယျတိုငျပွုလုပျကွညျ့ကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါရစရှေငျ့။ အားလုံးပဲ ရောဂါဘယ ကငျးရှငျးကွပါစေ။ ♥ ဆူးမွာ
Posted in: Article, DIY, WUHAN-CORONA-COVID 19Good Health Admin	 March 17, 2020
Activated Charcoal နဲ့ Clay ပါဝင်တဲ့ ဒီ face mask ဟာ အဆီပြန်တတ်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် အဆီ စုပ်ယူပေးနိုင်ပြီး သဘာဝအတိုင်း အသားအရေကို တင်းရင်းစေ ပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေထဲက အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှား ပေးနိုင်တာကြောင့် ဝက်ခြံမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီ face mask ပြုလုပ်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေက . . . – Clay Powder – ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ – Activated Charcoal (မီးသွေးမှုန့်) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်စာ – ပန်းသီးရှလကာရည် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်စာ – နှင်းဆီပွင့်ဖတ်ရည် (လိုသလောက်) ပြုလုပ်နည်း – […]
Posted in: DIYGood Health Journal	 September 30, 2019
တစ်နေ့လုံးပင်ပန်းသမျှ ရေချိုးကန်ထဲမှာ ရေချိုးဆားလေး နဲ့ စိမ်ရင်းနှပ်လိုက်ရရင် ဘယ်လောက် အပန်းပြေသွားမလဲနော်။ ရေချိုးဆားကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ဖို့ မခက်ခဲလှတာမို့ ဈေးကြီးပေး ဝယ်မနေဘဲ ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ကြည့်ရအောင်။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ – Baby Soap – ခွက်တစ်ခွက်စာ(Baby Mild ကဲ့သို့) – ဆားခါး – ခွက်တစ်ဝက်စာ – ပန်းရောင်ပင်လယ်ဆား – ခွက်တစ်ဝက်စာ – Liquid Bubble Bath – ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဝက်စာ (City mart များတွင် ရရှိနိုင်) ပြုလုပ်နည်း – ပြီးရင် ကလေးဆပ်ပြာရည် ခွက်တစ်ခွက်စာနဲ့ Liquid Bubble Bath ထမင်း စားဇွန်းတစ်ဝက်စာကို ပေါင်းထည့်ပါ။ – ပြီးရင် အားလုံးသမအောင် မွှေပါ။ […]
Posted in: DIYGood Health Journal	 September 23, 2019
နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့အခါမှာ Tint နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေကိုမှ ရွေးချယ်အသုံးပြုတတ်တဲ့ပျိုမေတို့အတွက် သဘာဝအတိုင်း Tint နှုတ်ခမ်းနီပြုလုပ်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။ တချို့ tint နှုတ်ခမ်းနီတွေလိုမျိုး နှုတ်ခမ်းက ခြောက်သွားတာ မျိုးမဖြစ်ဘဲ သဘာဝအတိုင်း နီရဲလှပ ချောမွေ့တဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်စေပါလိမ့်မယ်တဲ့။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက – ရေ ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းစာ – Vaseline လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ – ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ – Food Coloring တစ်စက်-နှစ်စက်ခန့် (မိမိနှစ် သက်ရာအရောင်) ပြုလုပ်နည်း – ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲမှာ ရေ ထမင်းစား ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာခန့်ထည့်ပါ။ – အဲဒီထဲကို Vaseline လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာပေါင်းထည့်ပါ။ – ပြီးရင် ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း စာထည့်ပါ။ – အဲဒီထဲကို Food Coloring […]
Posted in: DIYGood Health Journal	 September 16, 2019
Coffee Oatmeal Bodyscrub
ညိုတစ်ကွက်၊ မည်းတစ်ကွက်၊ ဖြူတစ်ကွက်နဲ့ နေလောင်ထား တဲ့အသားအရေတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလျော့နည်း နေပါသလား။ စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် ကော်ဖီအုတ်စပါး ကြေးချွတ်ခရင်မ်ပြုလုပ်နည်းလေးနဲ့ အချိန်ယူပြီး sခမကဘ လုပ်ကြည့် ပါ။ လင်းလက်တောက်ပကြည်စင်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်လေးတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်တာတွေက . . . – ကော်ဖီမှုန့် ခွက်တစ်ခွက်စာ – အုတ်စပါး ခွက်တစ်ဝက်စာ – သကြား ခွက်တစ်ဝက်စာ – ပျားရည် ခွက်တစ်ဝက်စာ – သံလွင်ဆီ ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာ ဒီပြုလုပ်နည်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ကော်ဖီ၊ သကြားနဲ့ အုတ်စပါးက သဘာဝကြေးချွတ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ကော်ဖီက သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပြီး ဆဲလ်ူဖြစ်ပေါ်မှုကို လျော့နည်း စေပါတယ်။ အုတ်စပါးကတော့ သဘာဝအစိုဓာတ်ထိန်းပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးဝင်ပြီး ပျားရည် ကတော့ […]
Posted in: DIYGood Health Journal	 September 2, 2019
ကျွန်မတို့ အလုပ်ကပြန်လာလို့ မောပန်းနွမ်းနယ်လာတဲ့အခါမှာ သံပရာရနံ့၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်ရနံ့လိုမျိုး ရနံ့တစ်ခုခုရလိုက်ရင် လန်း သွားတတ်ကြတယ်မလား။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ပင်ပန်းနွမ်းလျမှုတွေ အတွက် ရနံ့ကုထုံးက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လေ။ ဒီတော့ ပင်ပန်း သမျှပျောက်ပြီး အိပ်ကောင်းခြင်းနဲ့ အိပ်စက်နိုင်ဖို့ ရနံ့ကုထုံးအမွှေး တိုင်ပြုလုပ်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။ လိုအပ်တာတွေက . . . – စန္ဒကူးမှုန့် ထမင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်းစာ – Rosemary essential oil သငူ ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ -စန္ဒကူးမှုန့်နှစ်ဆ Essential oil တစ်ဆ) – ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ရွက်များ (သစ်ကြံပိုးခေါက်၊ စမုန်စပါး၊ နာနတ်ပွင့်၊ လေးညှင်းပွင့် စသဖြင့်) – ရေ – အမွှေးတိုင်ပြုလုပ်သည့်တုတ်ချောင်းလေးများ ပြုလုပ်နည်း – စန္ဒကူးမှုန့်တွေကို ရေအနည်းငယ်နဲ့ ပျစ်နှစ်နေအောင် ရောစပ်မွှေပါ။ […]
Posted in: DIYGood Health Journal	 August 29, 2019